Waste Landfill Bulldozer TYS165-3HW - China Xuanhua Ukwakhiwa Imishini
ngogandaganda TYS165-3HW kuyinto 165 amahhashi ithrekhi-uhlobo dozer nge wokubacindezela drive ngqo, lulwimi ngendlela elukhuni okwesikhashana futhi wokubacindezela ukusiza ekuqhutshweni, umshayeli wokubacindezela ukulawula lomshini bese olulodwa ezingeni eziqondisa nokuhlale unyathela amabhuleki, nokulawula. ngogandaganda TYS165-3HW libhekene okusezingeni eliphezulu kahle, buka evulekile, isakhiwo elungiselelwe, operation lula futhi isevisi nge eziphansi nokunokwethenjelwa lonke izinga. Kuyinto umkhiqizo ngcono for imfucuza handling ukusebenza. Imininingwane Dozer T ...
ngogandaganda TYS165-3HW kuyinto 165 amahhashi ithrekhi-uhlobo dozer nge wokubacindezela drive ngqo, lulwimi ngendlela elukhuni okwesikhashana futhi wokubacindezela ukusiza ekuqhutshweni, umshayeli wokubacindezela ukulawula lomshini bese olulodwa ezingeni eziqondisa nokuhlale unyathela amabhuleki, nokulawula.
ngogandaganda TYS165-3HW libhekene okusezingeni eliphezulu kahle, buka evulekile, isakhiwo elungiselelwe, operation lula futhi isevisi nge eziphansi nokunokwethenjelwa lonke izinga.
Kuyinto umkhiqizo ngcono for imfucuza handling ukusebenza.
(angafaki Ripper) Ukusebenza isisindo ( kg) 192200
Ground ingcindezi (K Pa ) 41.1
Min. phansi imvume (mm) 373
Dozing umthamo ( m ³) 4.6
Ububanzi Blade (mm) 4222
Max. ukumba ukujula (mm) 400
Ubukhulu sekukonke ( mm ) 5528× 4222× 3 190
Kulinganiswe ngo revolution (ngomzuzu) 1850
Amandla ligcina uthi lokuphotha luzungeza ( K W / HP ) 121/165
Max. torque engu (N • m / ngomzuzu) 830/1100
Kulinganiswe ngo-petrol (g / KW • h) ≤ 218
Uhlobo Swing uhlobo ugongolo wafutha.
isakhiwo Kumisiwe ka Equalizer ibha
N Irherho ithrekhi ezinamasondo ( ngamunye ohlangothini) 6
Inombolo yenethiwekhi ezinamasondo (ohlangothini ngalunye) 2
P batshelwa (mm) 203
W idth of izicathulo (mm) 800
Phambili (km / h) 0- 3.59 0- 6.76 0- 12.37
Emuva (km / h) 0-4. 33 0- 8.90 0- 14.96
Max. ingcindezi ohlelweni (MPA) 12
Pump uhlobo amaqembu amabili amaGiya futha
System okukhipha ( L / iminithi ) 185
T orque Converter 3-elementi 1-esiteji 1 okhombisa
T ransmission yemihlaba, amandla shift ukudluliswa nge ngesivinini ezintathu phambili futhi ngesivinini ezintathu ukuhlanekezela, isivinini kanye isiqondiso kungenziwa ngokushesha kushintshile.
S teering bamba. Multiple-disc amandla uwoyela yokusansimbi disc onomfutho ngu entwasahlobo. wokubacindezela eziqhutshwa.
Braking Brake bamba linjengamafutha ezimbili isiqondiso elintantayo band ukubopha eziqhutshwa mechanical unyawo isinyathelo.
F drive isilelesi Ukuhamba yokugcina kukhona ukwehliswa double nge sangaleso gear kanye ingxenye sprocket, okuyinto uphawu duo-Isigaxa uphawu.
Previous: Ukusingathwa Landfill Bulldozer SD7HW
Okulandelayo: Ukusingathwa Landfill Bulldozer TYS165-3HW
UKUNGCOLA landfill ngogandaganda TYS230-3HW
Ifeksi: +86 313 3186027
HBXG futhi Russian ejenti okukhethekile RBA Comp ...
Ngo-June 5, 2018, HBXG futhi Russian okukhethekile inkampani ejenti RBA ngokuhlanganyela nengxenye Ugol Rossii Imayini Isentha, okuyinto enkulu kunazo zonke futhi enethonya kunazo izimayini zamalahle embukisweni owawuse-Novokuznetsk emzini ...